ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ပေါ်တူဂယ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ (တရားဝင် အခေါ်အားဖြင့် ပေါ်တူဂီ သမ္မတနိုင်ငံ[မှတ်စု ၁]) သည် ဥရောပ အနောက်တောင်ပိုင်း အိုင်ဘေးရီးယန်းကျွန်းဆွယ် ပေါ်တွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီသည် ဥရောပ၏ အနောက်ဘက် အကျဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်နှင့် တောက်ဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ၊ အရှေ့ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် စပိန်နိုင်ငံ တို့က ဝိုင်းရံထားသည်။ အတ္တလန္တိတ် ကျွန်းစုများ ဖြစ်ကြသော အာဇိုး နှင့် မဒရီရာ တို့သည် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ တစိတ်တဒေသ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများဖြစ်သည်။
၆ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု
↑ ပေါ်တူဂီကို အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် အနီးစပ်ဆုံး ပေါတျူဂယ်လ်၊ ပေါ်တူဂီစကားဖြင့် အနီးစပ်ဆုံး ပူရ်တူဂယ်လ် ဟုရွတ်ဆိုနိုင်သည်။
↑ Portugal – Origin and meaning of the name Portugal by Online Etymology Dictionary။
↑ Winicius, Marcos. "Documentos danca portuguesa".
↑ Manuel géographique et statistique de l'Espagne et du Portugal ...။ Buisson (11 April 2018)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ&oldid=644727" မှ ရယူရန်
၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။